Ama-Movie Ahamba Phambili Wesiwombe Ongawabuka Ngesikhathi Sokuhlukaniswa | Izindaba zamagajethi
Ama-Movie Ahamba Phambili Wokubhebhetheka Ozowabukela Ngesikhathi Sokuhlukaniswa
UMiguel Hernandez | | Ama-movie nochungechunge, General, Ikhaya
I-COVID-19 iyi-coronavirus enobudlova, yingakho amazwe amaningi afana neSpain ethathe isinqumo sokuthatha izinyathelo ezeqisayo ukwehlisa ijika lesifo bese kuvimbela ukusuthiswa okungaphezu kokubonakala kohlelo lwezempilo. Siyakwazi lokho # QuédateEnCasa Kungaphezu kwe-hashtag, kunzima kithina sonke esinempilo evame ukusebenza ukuhlala amahora amaningi kangaka ngaphakathi kwezindonga ezine noma sisebenzisa i-telecommuting. Ukuze ukwazi ukubhekana kangcono ne-COVID-19, sikulethela ama-movie ayisishiyagalolunye aphathelene nobhubhane azokwenza ucabange ukuthi bekungahle kube kubi kakhulu.
1 Impi Yezwe Z
2 Igciwane (Umkhuhlane)
3 IZombieland: Bulala uqede
5 Izinsuku ezingama-28 kamuva / amasonto angama-28 kamuva
6 Isakhamuzi Esibi: Qedela iSaga
9 Amabhayisikobho weNetflix ngenyanga kaMashi
Impi Yezwe Z
Ngaphandle kokuthi Brad Pitt noMireille Enos, umhlaba uqala ukuhlaselwa yibutho le-undead, kepha konke kunomsuka walo bhubhane. UGerry Lane, ongungoti wezokuphenya weZizwe Ezihlangene, unikwe umsebenzi wokuthola "ikhambi" noma okungenani ukumisa inhlekelele yomhlaba. Kuyindlela yokuqala yokukukhumbuza ukuthi konke kungaba kubi kakhulu.
Bona uGerra Mundial Z ku-Netflix: LINK
Itholakala unomphela kuNetflix, Sky TV naku- HBO, ngakho-ke akufanele uthole imikhawulo lapho ubuka le movie. Uma uzama ukuyiqasha, ungasizakala ngokuthi iRakuten TV ibiza u- € 1,99 nakwezinye izitolo ezifana ne-Google Play Isitolo ne-Apple TV zibiza ama-euro angu-2,99.
Le filimu ka-2013 yadutshulwa eSouth Korea narra ukuthi igciwane eliqala ukwanda ezweni lase-Asia likwazi kanjani ukubhubhisa izisulu zalo ngemuva kwamahora angama-36 selivele lingene emzimbeni. Leli gciwane lidluliselwa ngumoya ngakho-ke liyingozi eseduze.
Ungayibona unomphela ku- Netflix futhi ihlala ngaphezulu kwamahora amabili. Yifilimu ecishe ifane nesimo samanje, ngakho-ke ingalimaza imizwa.
IZombieland: Bulala uqede
Amahlaya, asevele edlala. I-movie yesibili yeZombieland lapho sithola khona uWoody Harrelson no-Emma Stone phakathi kwabanye. Kule nkathi elandelayo sekuyisikhathi sokuqhubeka nokuhamba udabula i-United States of America futhi ubhekane nabangaphansi kokufuna ikhambi.
Ifilimu iyatholakala ku- I-Movistar + nakuVodafone TV ngokuphelele mahhala uma ubhalisele insizakalo yabo yethelevishini eku-inthanethi. Kuhlala ngaphezu kwehora nesigamu futhi kuyindlela enhle yokuhlekisa kulezi zikhathi ezinzima.
Omunye wemikhiqizo yakamuva ka-Arnold Schwarzenegger, kule movie igciwane eliyingozi lisakazeka emhlabeni wonke futhi kubonakala sengathi akunamkhawulo. UMaggie ungumfana oneminyaka engu-16 ubudala othelelekile futhi ifilimu isitshela ukuthi ubaba wakhe uzama kanjani ukuvimba uguquko lwakhe lube olungafile.
Ifilimu iyatholakala ku- I-Google Play isuka kuma-euro angu-1,99 kanye neRakuten TV kusuka kuma-euro angama-3,99 phakathi kwamanye amapulatifomu. Indaba enelukuluku engazange yamukelwe kahle ngabagxeki futhi ene-CGI ngobuningi yokuqeda ukusikhathaza.
Izinsuku ezingama-28 kamuva / amasonto angama-28 kamuva
Ngokombono wami omunye we-sagas ongcono kakhulu mayelana nezilokazane nama-zombies esingathola ku-cinema. Bamake ngaphambi nangemva kwendlela abalandisa ngayo le ndaba, beshiya inganekwane yesayensi ngemuva ukusikhumbuza ukuthi izinto ezinjengalezi zingenzeka, futhi kufanele sizilungiselele.
Womabili la mafilimu atholakala ku- I-Sky TV nakuVodafone TV ngokuphelele futhi ngokuphelele. Azizintsha ncamashi, kusukela ngo-2002 nango-2007 impela, ngakho-ke angisho ukuthi ziyatholakala kwezinye izingxenyekazi ezifana ne-YouTube ngokwesibonelo, ukuzijabulela ngokulinganisela, zingenza izinwele zakho zime ekugcineni.
Isakhamuzi Esibi: Qedela iSaga
Okwakudala phakathi kwezakudala bekungeke kulahleke, Ibe nefomethi yayo yemidlalo yevidiyo (eyinhloko nephumelelayo), ama-movie nakho konke ongakucabanga. Sinoxhaxha lwamafilimu atholakala kuzingxenyekazi ezithile, kepha hhayi kwamanye, ngakho-ke sikwenzela ukuhlanganiswa uma kwenzeka ufuna ukwenza umjaho we-Resident Evil:
Owakhile omubi: Kutholakala kuphela ukuthenga kwa-A3Player nakokunye okusele.
Isakhamuzi Evil 2 - Apocalypse: Ukuqasha kuphela kuRakuten TV, A3Player nokunye.
Isakhamuzi Esibi 3 - Ukuqothulwa: Ukuqasha kuphela kuRakuten TV, A3Player nokunye.
Residence Evil 4 - Afterlife: Itholakala mahhala ku- Netflix nokuqasha kwamanye amapulatifomu.
Isakhamuzi Esibi 5 - Impindiselo: Kutholakala ukuqasha kuRakuten TV, A3Player nokunye.
Resident Evil 6 - Isahluko sokugcina: Itholakala mahhala ku- HBO.
Le movie ka-2017 ebhekene noMartin Freeman isiyisa umhlaba othunyelwe ngemuva kokubhujiswa kwegciwane eliguqulela abantu kumaZombi. Inhloso kuphela ye-protagonist ukusindisa indodakazi yakhe, enezinyanga ezimbalwa ubudala, ngaphambi kokuba abe undead njengabo bonke abanye abantu.
I-movie ihlala ngaphezu kwehora nesigamu futhi iyatholakala ku- Netflix ngokuphelele mahhala.
Le movie ka-2011 lapho begqama khona UMarion Cotillard noMat Damon, isitshela ngezigemegeme zegciwane elibulalayo elisakazeka emhlabeni wonke. Ezinsukwini ezimbalwa igciwane liqeda inani labantu ikakhulukazi futhi ukuthi ukutheleleka kukhiqizwa ukuxhumana okuphakathi kwabantu.
Kungakanani umbono ongokoqobo, onemiphumela embalwa ekhethekile futhi mhlawumbe enye yezindlela ezinhle kakhulu esingazibona uma sifuna ukusebenza kahle futhi sithole umbono ocacile, sihlale sikhumbula ukuthi yibhayisikobho hhayi iqiniso eliphelele. Okwamanje itholakala kuphela ngokuqashwa kuRakuten TV, Apple TV nakuGoogle Play.
Amabhayisikobho weNetflix ngenyanga kaMashi
Uma ngabe ubufuna okungaphezulu noma uphasa uhlobo "lobhubhane", lezi izinhlobo ze- Ukuqala kweNetflix ngoMashi:
UPrincess Mononoke - kusuka ngoMashi 1
Umlando weNkosazana Kayuga
Nausicaa weSigodi Somoya
I-Arrietty kanye nezwe lezincane
Omakhelwane bami iYamada
Ukuthula Kwedolobha Elimhlophe - Mashi 6
Sitara: Vumela Amantombazane Aphuphe Ekugcineni - Mashi 8
Amantombazane Alahlekile - Mashi 13
I-Hole - Mashi 20
UFangio, indoda ethambisa imishini
Ikhaya - Mashi 25
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ama-Movie Ahamba Phambili Wokubhebhetheka Ozowabukela Ngesikhathi Sokuhlukaniswa
ISwitzerland inganciphisa ukufinyelela kuzinsizakalo zedijithali. Kungenzeka yini eSpain?
Izinsiza Zamahhala Zokubhekana Nokuhlukaniswa Ne-Coronavirus